Kuhlatshwa eyokuzingelwa kobhejane | isiZulu
Kuhlatshwa eyokuzingelwa kobhejane
Usinde kukubi ubhejane
Kubulawe ubhejane eLimpopo
Amaphoyisa athungatha abasolwa
Durban - Isishoshovu esilwisana nokuzingelwa kobhejane ngokungemthetho, sesifakele inselelo usomabhizinisi okhokhe imali ecishe ifinyelele ku-R1 million ukuze azingele ubhejane omhlophe, yokuba aziveze, eshintshise isibhamu sakhe nge-camera, ashuthe ahambe.
USimon Bloch, we-Outraged South African Citizens Against Poaching, ubekhuluma ngemuva kwesimemezelo seZemvelo KZN Wildlife sokuthi usomabhizinisi waseKZN ukhokhe u-R960 000 ukuze athole ilungelo lokuzingela ubhejane omhlophe eMkuze Game Reserve.
Ilungelo litholakale ngemuva kokuba abeZemvelo becele abantu ukuba bafake izicelo kwi-internet zokubulala izilwane, esezingaphezulu kwesibalo esidingekayo.
AbeZemvelo bathi lokhu kwenziwa njalo ngonyaka ngenxa yokugcwala kwesiqhingi, ngakho izilwane kumele zisuswe.
Ukuvulela ithuba lokuzingela izilwane, kungenisa imali yemizamo yokongiwa kwemvelo, kusho isikhulu esiphezulu, uBandile Mkhize.
Kodwa-ke lesi senzo sibacasulile labo abalwela uluhlangula obhejane kulesi sikhathi lapho izinga lokuzingelwa kwezilwane ngokungemthetho linyukile.